श्रीमान/श्रीमती २ वर्षसँगै बसे ११ किलो ताैल बढ्ने
एजेन्सी । माया गर्दा तौल बढ्छ । यो कुरा हामीले होइन विभिन्न शोध एवं अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ । जो जोडी आफ्नो विवाहसँग निकै सन्तुष्ट र खुसी छन् उनीहरुको तौल बढ्ने विभिन्न अनुसन्धानले दाबी......
काठमाडाैं । ठमेल आसपास बसेर मानिसको खोजिमा अर्थात् ग्राहकको खोजिमा हुने रोजीको उमेर २५ पुगेको छ। उनको वास्तविक परिचय भने अर्कै छ। युवती जस्तै सुन्दर देखिने र यौन व्यवसायलाई रोजीरोटीको उपाय बनाएकी रोजी झट्ट......
नेपालमा सबैभन्दा धनी व्यक्ति र अति कम गरीब नेपालीको सम्पत्ति असमानताको अन्तर कति होला ? मुलुकमा समृद्धि र समानताको सपना देखाइएका बेला यो प्रश्न सान्दर्भिक हुन गएको छ । सम्पत्ति र अवसरको असमानता चुलिँदै......
साना बच्चालाई मसाज गर्दा पीडा कम हुन्छ : अध्ययन
शिशुहरुलाई बिस्तारै थपथपाउँदा वा मसाज गर्दा उनीहरुको पीडा कम हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । साना बच्चाको टाउको, निधार, पिट्ठ्यूँ, छातीसहितका भागमा बिस्तारै हातले थपथपाउँदा मस्तिष्कमा पीडाको सञ्चार गर्ने गतिविधि कम हुने र त्यसले......
जाडो मौसम र डिप्रेसनबीच के सम्वन्ध होला र ? सायद तपाईं यस्तै सोच्नुहुन्छ । तर, गर्मी मौसमको तुलनामा जाडोमा धेरै मानिसहरु डिप्रेसनको शिकार हुने गरेको सत्य हो । के हो सिजनल एफेक्टिभ डिसअर्डर ?......
दुई छोराकी आमा, भर्खर जुँगाको रेखीबसेका तन्नेरी युवासँग चक्कर चलाउँछिन् । कुनै ४० वर्षकी महिला, २० वर्षको युवासँग रोमान्स गर्छिन् । यस्तो सम्बन्धको नियत के हुन्छ ? देहसुख अर्थात् शारीरिक अानन्द मात्र हो त......
एजेन्सी । अमेरिकामा केहि समयअघि एक सर्वेक्षण गरिएको थियो । हरेकदिन दाह्री काट्ने र नकाट्ने पुरुषबीच के अन्तर हुन्छ भनेर । सो अध्ययनबाट नयाँ तथ्य फेला परेको सर्वेक्षणमा संलग्न अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन् । सार्वजनिक......
डिप्रेशनबाट बच्न के गर्ने के नगर्ने ?
जिन्दगीमा सँधै आफूले सोचेजस्तो हुँदैन । कहिलेकाहीँ लगातार परिस्थिती आफ्नो प्रतिकुल हुन सक्छ । यस्तोमा कहिलेकाहीँ मानिसलाई निराशाले सताइदिन्छ । भनिन्छ हरेक व्यक्ति जीवनको कुनै न कुनै मोडमा डिप्रेशनको शिकार बन्छ । कसैमा त......
मोदी भ्रमणमाथि संसदमा माओवादीले उठायो प्रश्न : अरुण-३ संविधान विपरित
काठमाडौं, वैशाख ३१ । माओवादी केन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका विषयमा केही प्रश्न उठाएको छ । आजको संसदको बैठकमा माओवादी प्रवत्ता पम्फा भुसालले मोदीको भ्रमणमा नेपाल भारतबीच रहेका जल्दाबल्दा समस्या समाधान नभएको......
मोबाइल नबोक्ने ‘ठूला मान्छे’ !
काठमाडौं, वैशाख १५ । एक्काइसौँ शताब्दीमा मानिस प्रविधिविनाको जिन्दगीको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । नयाँ प्रविधिसँग मानिस आफूलाई व्यस्त बनाउन चाहन्छन् । कम्प्युटर, मोबाइल, ट्याबलगायतका प्रविधिले मानिसलाई यति धेरै सुविधा दिलाइदिएको छ कि जतिवेला......
भूकम्पपछिको तीन वर्ष पीडितको अवस्था उस्ताको उस्तै
काठमाडौं, वैशाख १२ । भूकम्प गएको तीन वर्षमा सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेका बिकमान थामीको टहरामा सम्झनलायक तीन दृश्य देखिए। पहिलो दृश्य : चुनावको : १० जनाको परिवार भएको बिकमानसँग केही भोट छन्। फरकफरक पार्टीका नेता उनको......
सिंहदरवारभित्र खैनी–चुरोट बोकेर जान निषेध
काठमाडौं, चैत १३ । निजी वा संस्थागत काम लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालय छिर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र साथमा सुर्तीजन्य पदार्थ छ भने तपाईंलाई सुरक्षाकर्मीले गेटमै रोक्नेछन्। खल्तीमा बोकेका सुर्तीजन्य पदार्थ फालेपछि मात्रै सुरक्षाकर्मीले तपार्इंलाई मन्त्रालय प्रवेशको......
“हाम्रो पहिचान सम्बर्दन र विकाश हाम्रो अभियान” भन्ने मेला नारा सहित कुमारी देवी यूवा क्लब निलकन्ठ १० धादिङद्वारा आयोजित प्रथम चैते दशै मेलाको तयारी अन्तिम चरणमा पूगेको छ । निलकनण्ठ नगरपालिका–१० स्थित टारिबेसीमा हूने......
के तपाई घरिघरि कोल्टे फेरेर सुत्नुहुन्छ ? यसरी सुत्नुको फाइदा जान्नुहोस्!
के तपाई घरिघरि कोल्टे फेरेर सुत्नुहुन्छ ? मानिस सुत्दाखेरी उसको शरीरको थकान कम हुन्छ र बिहान उठ्दा ताजापन र फुर्ती समेत उसले प्राप्त गदर्छ । दिनभरि काम गरेर थकान भएपनि राम्रो निद्रा लाग्दैन अनि......
अन्तराष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगितामा नेपाली सहभागिता बढ्ने क्रममा रहेको छ । यही परिप्रेक्षमा लुमेरी इन्टरनेसनलको आयोजनामा संचालन हुने मिसेस् एशिया प्यासिफिक ब्युटी प्याजेन्ट २०१८ मा नेपालको तर्फबाट गोमा अधिकारी र विन्दु लामाले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका......
के तपाई आफ्नो अनुहारलाई चमकिलो बनाउन चाहनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस् !
के तपाईलाइ थाहा छ हरेक मानिसको चमकता उमेर अनुसार नै परिवर्तन हुँदै जान्छ । अनुहारको चमकता उमेर अनुसार हराउँदै जान्छ । आफ्नो अनुहारलाई जहिले पनि सुन्दर राखिरहनका लागि निकै ध्यान दिनुपर्छ । आफ्नो अनुहारको......
नर्सिङ छोडेर केटाको कपाल काट्दै नीरु
२१ फागुन,काठमाडौं । २०३२ सालमा पोखरामा जन्मिएकी निरु कुवंर आफ्नो दश वर्षिय नर्सिङ पेसालाई छाडेर पुरुषको कपाल काट्न थालेकी छिन् । राजधानीको ओम हस्पिटल र विएन्डी हस्पिटलमा डा. भोला रिजालसहितका डाक्टरहरुसँग १० वर्ष नर्सिङ......
के तपाई नराम्रो सपना देख्नुहुन्छ ? देख्नुहुन्छ भने यी मानसिक रोगको लक्षण हुनसक्छ
सुतेपछि सपना देख्नु सामान्य हो । तर निन्द्रामा नराम्रो सपना देख्नुहुन्छ या कुनै पनि कुरामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सकिरहनु भएको छैन भने अब सचेतन बन्नुहोस् । कतै तपाईंलाई ‘पोष्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिस्अर्डर (पीटीएसडी)’मानसिक......
के तपाईलाई थाहा छ किन निदाउँछ हातखुट्टा ? कारण जान्नुहोस् !
हातखुट्टा निदाएको हामी सबैले सुनेको र भोगेको पनि छौ । आखिर किन यस्तो हुन्छ ? यो प्रायजसो सबै मानिसले कुनै न कुनै बेला खुट्टा निदाएको अनुभव गरेका हुन्छन् ।हातखुट्टा निदाउदा उभिन र हिड्न पनि सकिदैंन......
जाडोमा आफ्नो शरीरलाई न्यानो राख्नुहोस ,यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस् !
खानपानमा केही चीज समावेश गरेर आफ्नो शरीरको तापमानलाई सन्तुलित राख्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा यसले कयौँ रोगहरूबाट छुटकारा दिलाउँछ । जाडो मौसममा कयौँ किसिमका रोगहरूको आशंका बढ्छ । घरमै पाईने केही सजिला उपाय पनि......